I-Old Dovecote-Llandetty Self Catering Barn
Uvimba sinombuki zindwendwe onguNeil
I-Old Dovecote yaqala ngenkulungwane ye-17 kwaye iyinxalenye yoluhlu olunomtsalane lwezakhiwo zasefama ezidweliswe ngokwembali kwiFama yaseLlandetty Hall, eme kumbindi wePaki yeSizwe yaseBrecon Beacons. Ukuguqulwa kweshedi kwakhutshiswana ngoJuni 2021 kwaye ibekwe kwiihektare ezili-15 zamadlelo abucala kumjelo weMon Brec.
Uya kungena kwi-Old Dovecote ukusuka kwiBanga lesi-II eLudwe kwintendelezo yefama ngomnyango wakho omkhulu wangaphambili. Uya kungena kwindawo yokuhlala epholileyo kwaye eneempawu ezintle apho kufikeleleka khona indawo yokutyela ekhitshini. Indawo yokuhlala iqulethe i-sofa yekona (iba yibhedi epheleleyo yesofa ephindwe kabini kwiindwendwe ezimbini), isitshisi sokhuni kunye nommandla weTV. Kukho ukufudumeza phantsi komgangatho ngaphantsi komgangatho weflegi yamatye. Kukho iWC kunye negumbi lokuhlambela phantsi kwezitepsi ezintle ze-oki ezikhokelela ukusuka kwindawo yokuhlala ukuya kwigumbi elikhulu lokulala kumgangatho wokuqala. Igumbi lokulala liqulethe ibhedi yobukhulu obutofotofo kakhulu, i-wardrobe eyakhelwe ngaphakathi, isifuba sedrowa, iitafile ezimbini ezisecaleni kwebhedi kunye nesitulo. Igumbi lokulala lijonge indawo yokuhlala engezantsi kwaye livulekele kwisakhiwo sophahla esimangalisayo kunye nembali ye-oki. Igumbi lokulala likhokelela kwigumbi lokuhlambela elikhulu eline-en-suite elinebhafu eneshawa ngaphezulu, isitya sokuhlambela kunye neWC. Emva kumgangatho osezantsi ikhitshi ine-oveni, isitovu sokungenisa izinto, isikhenkcisi sefriji, isinki, imicrowave, itoaster, iketile, indawo enkulu yokugcina kunye noluhlu olugcweleyo lwezitya, ukupheka kunye nempahla yasekhitshini. Ibhadi yaguqulwa yasuka kwindawo eyayikade iyimveliso yobisi kunye nevenkile ethengisa ukutya okuziinkozo kwifama kwaye igcina izinto ezininzi zembali ezibandakanya iindonga zamatye eziveziweyo, imiqadi ye-oki kunye neetrasi, ifestile ye-gothic arched kunye nomgangatho wamatye.
IFama yaseLlandetty Hall ikwindawo encinci yaseLlandetty emi phakathi kwedolophu eyimbali yaseCrickhowell kunye neBrecon kumantla eBrecon Beacons National Park kwaye idityaniswe yi-A40. UMlambo i-Usk uhamba ecaleni kweMpuma yefama kwaye iMonmouthshire kunye neBrecon Canal ihamba phakathi kwefama ukuya eNtshona. Sinofikelelo lwethu lwabucala kwindlela yokutsala umjelo. Ipropathi ibekwe ngaphakathi kweehektare zayo ezili-15 zomhlaba wokufama ukusuka kwindlela ende yabucala ephuma kwi-B4558. Iilali ezincinci zaseLlangynidr naseTalybont, zineendawo zabo zokusela kunye neevenkile ezincinci, zombini zimalunga neekhilomitha ezi-2 ukuya eMazantsi naseMantla ngokulandelelanayo kwaye zifikeleleka ngeenyawo ngendlela yetowpath. I-Old Dovecote sesinye sezakhiwo ezithathu ezidweliswe kwiifama esithe saziguqula zaba ziindlwana zeeholide.
Sihlala kwindlu yasefama kwaye siya kukubulisa xa ufika okanye sinokushiya izitshixo ukuba ziqokelelwe. Siza kufumaneka ukuze sikuncede ukuba unombuzo. Siyavuya ukunxibelelana nawe kancinci okanye kangangoko ufuna.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Llandetty